Guddiga Dib U Eegista Dastuurka ayaa sheegay inuu ka shaqeynta Dastuurka ku dhameynayo waqtigii loogu talogaly – Kalfadhi
Guddiga Dib U Eegista Dastuurka ayaa wada inuu isu tababaro sidii ay ugu sahlanaan lahayd ka shaqeynta Dastuurka Soomaaliya, oo ay horay u sheegeen iney ka shqeeyeen ilaa iyo shan cutub. Xoghayaha Guddigaas, Xuseen Sh. Maxamuud, ayaa tilmaamay inuu Guddigu baranayo sidii ay Maamulka Dowladda ula shaqeyn lahaayeen.
Sidoo kale, waxay isla Xubno ka tirsan Guddiga ay Guddiga intiisa kale barayaan taariikhda Dastuurka Soomaaliya iyo sidii ay u suuragelin lahaaayeen iney Dastuurka Soomaaliya dib ugu eegaan waqtiga loo qorsheeyey oo aan dib looga dhicin, si loogu qaado afti ah “Qof iyo Cod”. Sidoo kale, waxa uu Guddigu sheegay inuu Guddigu qaadanayo tababar u sahlaya qaabka ay dadka ugu soo bandhigayaan Dastuurkooda, si ay u baraan.
Muuqaal la soo dhigay Bogga Feysbuugga ee Guddiga ayuu Xoghaye Xuseen ku yiri “tababarkaan waxa uu noo socon doonaa ilaa isbuuca soo socda, waxaana quburo ka tirsan Guddiga ay Guddiga barayaan sidii ay shaqadooda u qabsan lahaayeen, una wanaajin lahaayeen”.
Guddiga Dib U Eegista Dastuurka, oo laga soo dhex doortay Baarlamaanka Soomaaliya, waxa uu dib habeen, uu kala tashanayo qeybaha bulshada ee dhamaan gobolada Soomaaliya, ku wadaa Dastuurka Soomaaliya. Guddoomiyaha Guddigaas, Cabdi Xasan Cawaale, (Qeybdiid), ayaa horay u sheegay iney soo qabteen hawsha Dastuurkaas in badan oo ka mid ah.
Culeysyada sharci ee qabsan doona Hanti-Dhawraha Guud ee Qaranka marka uu xilkaas qabto